American Airlines manohy ny St. Maarten Comeback
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » American Airlines manohy ny St. Maarten Comeback
NEW YORK, NY (21 septambra 2018) - Mbola nanohy nanolotra serivisy vaovao sy natomboka teo anelanelan'ny tanàna lehibe erak'i Etazonia sy ny seranam-piaramanidina Princess Juliana International (SXM) malaza any The Friendly Island, ny American Airlines.
Ny mpandeha any St. Maarten dia afaka manidina ny American Airlines avy any amin'ny Newark International Airport (EWR) sy ny Airport International Airport (PHL) hatramin'ny 19 desambra amin'ity taona ity. American Airlines koa dia nanambara, ny fiandohan'ny volana Jona, ny famerenana amin'ny laoniny ny serivisy efa antenaina indrindra avy any Charlotte, seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Charlotte Douglas any North Carolina mankany St. Maarten ny 4 Novambra.
"Ny fiaramanidina vaovao avy amin'ny American Airlines sy ireo mpitatitra hafa manerana an'i Etazonia dia porofon'ny fijoroana sy ny tanjaky ny nosintsika," hoy ny minisitry ny fizahantany, raharaham-bahiny, fitaterana & fifandraisan-davitra, Stuart Johnson. "Ireo zotram-piaramanidina vaovao sy miverina ireo dia manome fanamorana bebe kokoa ny fidirana amin'ny St. Maarten sy toerana itodiana hafa ao amin'ny faritra, tena mampiseho ny maha-zava-dehibe ny seranam-piaramanidintsika ho foibe."
“Mampiseho ny fahatokisan'ny American Airlines ny fiverenany St. Maarten / St. Martin, ”hoy ny fanampian'ny talen'ny fizahan-tany St. Maarten, May-Ling Chun. "Ny sehatra ho an'ny daholobe sy ny tsy miankina dia niara-niasa tsy tapaka tamin'ny American Airlines mba hiantohana ny fiverenan'ireo sidina amin'ny fomba voalanjalanja mameno ny fisokafan'ny trano fonenana isan-karazany."
Na ny sidina Charlotte na any Philadelphia dia hiasa isan'andro raha ny serivisy avy any Newark kosa dia isan-kerinandro, amin'ny asabotsy.
WTTC dia miantso ny indostrian'ny fizahan-tany mba hanatsara ny herin'ny haitao amin'ny Andro maneran-tany ho an'ny fizahan-tany hamoronana asa
Hafatra avy amin'ny minisitry ny fizahan-tany sy ny fiaramanidina sivily Grenada